मंसिर १ बाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क? – खबर खुराक
Home > मुख्य समाचार > मंसिर १ बाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क?
काठमाडौँ, मंसिर । विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०७८, बुधबार १४:५९
Previous: प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत : पक्षमा ५०, विपक्षमा २९
Next: प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली भइसक्यो, अब नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छः शम्भु थापा